KASHIFAAD: Chelsea oo hadiyad gaar ah siisay kooxdii ka caawisay hanashada koobka EPL, balse waa kooxdee? | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » KASHIFAAD: Chelsea oo hadiyad gaar ah siisay kooxdii ka caawisay hanashada koobka EPL, balse waa kooxdee?
KASHIFAAD: Chelsea oo hadiyad gaar ah siisay kooxdii ka caawisay hanashada koobka EPL, balse waa kooxdee?
Agaasimaha farsamada kooxda Chelsea Michael Emenalo ayaa daaha ka qaaday inuu hadiyad gaar ah u diray kooxda Leicester City maadaama ay si dadban uga caawiyeen inay ku guuleystaan koobka horyaalka England Premier League xilli ciyaareedkaan iyagoo xagaagii lasoo dhaafay ka iibiyey mashiinka qadka dhexe N’Golo Kante.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa door muhiim ah ka ciyaaray inay Leicester City si lama filaan ah ugu guuleysato koobka horyaalka EPL xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, ka hor inta uusan usoo dhaqaaqin kooxda Chelsea xagaagii lasoo dhaafay isagoo wacdaro kasoo dhigay tartankii Euro 2016 ee lagu qabtay dalkiisa.
26 sanno jirkaan ayaana markale qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigay fasal ciyaareedkaan, isagoo xoojiyey kooxda Chelsea oo markeedii lixaad taariikhda ku guuleysatay koobka Premier League, wuxuuna ku guuleystay abaalmarinnada PFA Player of the Year Award iyo Football Writers’ Player of the Year Award.
Emenalo ayaa u sheegay majaladda London Evening Standard isagoo xalay ku sugnaa xafladda FWA: “Nasiibka ayaa ina caawiyey. Hadiyad ubaxyo ah ayaan u diray kooxda Leicester City maadaama ay naga iibiyeen N’Golo Kante.”
Tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa durba isha ku haya inuu xoojiyo kooxdiisa oo xilli ciyaareedka soo aadan kusoo laaban doonta tartanka UEFA Champions League, wuxuuna sidoo kale doonayaa inay Kante iyo asxaabtiisa Blues difaacdaan koobka Premier League.